Ny batisa alentika anaty rano dia fampianarana sy fombam-pivavahana kristiana momba ny batisa na batemy. Mampahatsiahy ny zavatra niainana amin ny fanavaozana ara-panahy izany, izay anapahan ny mino, aorian ny fahaterahana indray, manapa-kevitra ...
Ny Mpitondra Rano dia antokon-kintanny zôdiaka andalovanny masoandro aminny 16 Febroary hatraminny 11 Marsa. Ny antokon-kintanny Tandrok Osy no eo andrefany fa ny anny Hazandrano kosa no eo atsinanany. Avy aminny teny arabo hoe ادلو / Al-Dalu io ...
Ny Jiro sy Rano Malagasy dia orinasam-pajakana mamokara aratra sy rano eto Madagasikara. Ao Antananarivo no misy ny foibeny. Mahatratra ay amin ny 340 000 any ho any ny mpanjifa aratra ao aminy izay miparitaka amin ny toerana miisa 114, ary miisa ...
I Eofrata dia renirano ao Azia izay manana halavana mirefy 2780 km. Izy sy ny renirano Tigrisy no mamorona ilay faritra atao hoe Mesopotamia. Io renirano io dia mahazo rano avy aminny rotsakorana sy ny fitsonihanny ranomandry ka miovaova ny habet ...
Maro ny firenena mamokatra akondro maneran-tany nefa ireo firenena ao Amerika Afovoany no mpanondrana azy betsaka. I Japana no firenena mpanafatra akondro betsaka indrindra nanomboka tamin’ ireo taona 1960. Ao Eorôpa no misy ny tsenan’ akondro ir ...
Efa tany amin’ ny taonjato faha-7 tal. J.K. no nambolen’ ny olona ny kafe, izay vanimpotoana namokarana azy tany Arabia, teny amoron’ ny Ranomasina Mena. Nanomboka tamin’ ny taonjato faha-15 dia niitatra nankany Iemena ny fambolena kafe, avy eo n ...
Ny Adalo dia vintana fahiraika ambinny folo aminny fanandroana malagasy. Ny Adijady no eo alohany ary ny Alohotsy no manaraka azy. Ny tapany andrefana aminny rindrin-trano avaratra no toerana omena azy. Vintan-dranomaso sy alahelo ny Adalo araka ...
Ny Hazandrano na Trondro dia antokon-kintanny zôdiaka andalovanny masoandro aminny 11 Marsa hatraminny 18 Avrily. Ny antokon-kintanny Mpitondra Rano no eo andrefany fa ny anny Ondrilahy kosa no eo atsinanany. Avy aminny teny arabo dia atao hoe ال ...
Ny Baiboly prôtestanta dia Baiboly kristiana araka ny fandikan-tenin’ ny Prôtestanta izay sady vokariny no ampiasainy indrindraindrindra amin ny fotoam-pivavahana. Ny ao amin io Baiboly io dia ahitana bokin ny Testamenta Taloha miisa 39 sy ireo b ...
Ny Boky voalohanny Makabeo dia boky ao aminny Baiboly jiosy aminny teny grika atao hoe Septoaginta na Septanta. Io boky io dia mitantara ny zavatra nataonny fianakaviana Hasmôneana nandritra ny tolona nataonireo Jiosy ho anny fahaleovantenany teo ...
Ny Boky voalohanny Mpanjaka na Mpanjaka voalohany dia boky ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly izay isan’ireo atao hoe boky fitantarana. Ny Mpanjaka voalohany dia mitantara ny fametrahana an’i Solomona ho mpanjaka, ny fanorenany ny Te ...
Ny Boky faharoanny Mpanjaka na Mpanjaka faharoa dia boky ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly izay isan’ireo atao hoe boky fitantarana na ara-tantara. Ao amin’ny Tanakh izy dia isan’ireo bokinny mpaminany. Manohy ny tantaran’ny Fanjaka ...
Ny Boky faharoan’i Samoela dia boky hita ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly sy ao amin’ny Tanakh, boky masin’ny Jiosy. Mitantara ny momba an’i Davida, mpanjaka israelita izay isan’ireo malaza indrindra, ny boky. Resahinio boky io koa ...
Ny Bokinny Mpitsara dia boky ao aminny Testamenta Taloha ao aminny Baiboly sady ao aminny boky masinny Jiosy, dia ny Tanakh. Mitantara ny zavatra malaza nataonireo mpitsara voatendrinAndriamanitra hitondra sy hanafaka ny Zanaki Israely tao aminny ...
Bokin ny Genesisy na Bokin ny Jenezy na Bokin ny Genesý no iantsoana ny boky voalohany ao amin ny Baiboly. Mitantara ny famoronan Andriamanitra izao rehetra izao sy i Adama sy i Eva, olombelona voalohany, io boky io. Mitantara ny amin ny safodran ...
Ny bokinny mpaminany na bokim-paminaniana dia fitambarana boky ao aminny Testamenta Taloha ao aminny Baiboly izay inoanny Kristiana fa nosoratanny mpaminany nahazo tsindrimandry na fanilovana avy aminAndriamanitra. Fanasokajiana ao aminny Baiboly ...
Ny Boky faharoanny Makabeo dia boky ao aminny Baiboly jody aminny teny grika atao hoe Septoaginta na Septanta. Mitantara ny fanoherana nataonireo Makabeo io boky io nefa maneho izany aminny fomba fijery teolojika kokoa fa tsy ara-tantara. Kely ko ...
Ny Boky voalohan’i Samoela dia boky hita ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly sy ao amin’ny Tanakh, boky masin’ny Jiosy. Mitantara ny fanombohan’ny fitondrà-mpanjaka voalohany tao amin’ny Israelita sy ny adiny tamin’ny firenena fahaval ...
Ny Bokin’i Rota dia boky ao amin’ny Testamenta Taloha, ao amin’ny Baiboly, sy ao amin’ny Tanakh, boky masinny Jiosy. Mitantara ny fiainan’ny fianakaviana iray tamin’ny andron’ny mpitsara ny boky, ka manasongadina ny fifikiran’ny vehivavy moabita ...
Pentateoka, Boky dimin i Mosesy na Boky dimin i Môizy no iantsoana ny fitambaran ireo boky dimy voalohany ao amin ny Baiboly, izany hoe ao amin ny Testamenta Taloha. Ny fizaràna hafa manampy an io ao amin ny Testamenta Taloha dia ireo Boky ara-ta ...
Efa tany amin ny 400 000 taona lasa no nisian ny olombelona tao Gabôna. Araka ny lovantsofina dia ny Pigmea, avy eo ny vahoaka banto, no mponina voalohany tao Gabôna. Taty aoriana, rehefa tonga ny tatsambo pôrtogey tamin ny taonjato faha-15 vao n ...
Magnetotherapy dia iray aminireo fanafody tsy mahazatra. Ireo mpitsabo Magnetotherapist dia milaza fa mahay manasitrana aretina isan-karazany aminny andriamby. Ny Magnetotherapy dia heverina ho tsy ara-tsiansa aminny asa ara-pahasalamana satria m ...
Ny PostgreSQL dia ny banky angona misokatra aminny maro ny endri-javatra. Ny fampandrosoana ny maharitra efa mihoatra ny roa taona mahery, ary dia mifototra aminny voaporofo tsara ny trano izay efa namorona mafy ny fomba fijerinny mpampiasa maner ...
Ny fianarana ny fanatontoloana dia fianarana ambaratonga ambony mikasika ny politika, toen-karena, ny tontolo iainana ary ny fifandraisana ara-kolontsaina izay misy fiantraikany amin’izao tontolo izao. Ny fianarana ny fanatontoloana dia mahakasik ...
Rafohy dia mpajakavavy vazimba nanjaka hatrany Alasora ao afovoan-tany eto Madagasikara mandra-pahafatiny. Teo anelanelan ny taona 1530 sy 1540 izany. Nandimby ny mpanjakavavy Rangita izy. Ny loharano sasany dia milaza fa reniny Rangita; ny hafa ...
Ny prôtestantisma dia iray amin ireo sampana lehibe ao amin ny kristianisma ankoatry ny katôlisisma sy ny Ôrtôdôksia. Ny prôtestantisma dia mahafaoka ireo fiangonana nipoitra mivantana na tsia amin ny Refôrmasiona ka mizara ho sampany lehibe sy s ...
Ankehitriny ny pejy mikasika ny taona 2013 ao aminny Kalandrie gregoriana Ny taona 2013 nanomboka taminny andro Fahatelo. Izany dia any aminny faha-13 taona ny taonarivo faha-3 sy faha-3 taona ny folo taona 2010. Farany, dia ny 2013ο taona ny Kri ...
Io pejy io mifandray aminny taona 2019 ao aminny Kalandrie gregoriana Ny taona 2019 dia manomboka aminny andro talata. Izany no faha-19 taona ny taonarivo faha-3 sy faha-9 taona ny folo taona 2010. Farany dia ho aminny 2019ο taona ny Kristianina ...
Dominique de Silos Yi Yuanji Guigues Ier dAlbon Renaud Ier de Nevers Juda ibn Balaam Qiwam ad-Dawla Constantin IX Ramire Ier dAragon Gilbert de Brionne
Ankehitriny ny pejy mikasika ny taona 2017 ao aminny Kalandrie gregoriana. Ny taona 2017 nanomboka taminny 1 janoary dia andro alahady. Izany dia ho ny taona faha-17 ny taonarivo faha-3 sy faha-7 taona ny folo taona 2010. Izany no ho 2017ο taona ...
Io pejy io mifandray aminny taona 2018 ao aminny Kalandrie gregoriana Ny taona 2018 dia manomboka aminny andro alatsinainy. Izany dia ny faha-18 taona ny taonarivo faha-3 sy faha-8 taona ny folo taona 2010. Farany dia ho aminny 2018ο taona ny Kri ...
Song Qinzong Adrien IV Jabir Ibn Aflah Godefroid II de Louvain Godefroy de Huy Abd al-Mumin Almohades Al Idrissi Robert Burdet Archambaud VII de Bourbon Geoffroy de Monmouth Phagmo Drupa Aelred de Rievaulx Odon de Novare
Testamenta apokrifa no iantsoana ireo soratra manana lohateny manomboka aminny hoe Testamenta nefa tsy hita ao anatinny Baiboly na ny Tanakh. Ny ankamaroanizy ireo dia nosoratana teo anelanelanny fotoana nanoratana ny Testamenta Taloha sy ny Test ...
Ny Soratra Masina dia ireo teny voasoratra sy notenenin ireo olo-masin Andriamanitra notsilovin ny Fanahy Masina. Amin ny fivavahana jiosy sy ny mpanoratra ny Testamenta Vaovao dia ny Tanakh no lazainy hoe Soratra Masina fa amin ny Kristiana dia ...
Ny Baibolini Lotera dia Baiboly voasoratra amin’ny teny alemàna tamin’ny taona 1522, nosoratani Martin Lotera, izay nahitana ireo boky ao aminny Testamenta Taloha araka ny kanonanny Baiboly hebreo sy ny Testamenta Vaovao ary ny boky deoterokanoni ...
Ny markiônisma na marsiônisma dia firehana teôlôjika tao amin ny Fiangonana voalohany sady finoana doalista izay nipoitra avy tamin ny gnôstisisma ka milaza fa ny vaovao mahafalin i Kristy dia vaovao mahafalim-pitiavana madiodio ka mifanohitra am ...